सोंपाल समाजद्वारा पत्रकार हुम गुरूङलाई स्वागत तथा बिदाइ
जगदीश गुरुङ -
लन्डन । सोंपाल समाज युकेले बेलायत भ्रमणमा रहेका पत्रकार हुमबहादुर गुरुङको स्वागत तथा बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
एभरेष्ट टाइम्स पत्रिकाको निमन्त्रणमा बेलायत आएका पत्रकार गुरुङको स्वागत तथा बिदाइका निम्ति सोंपाल समाजले गत सेप्टेम्बर २६ तारिखको दिन कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रमका अतिथि एवं कास्की आवाजका सम्पादक गुरुङ स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका थिए ।
गोल्डेनसिप रेस्टुरेन्टमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यसमिति र सल्लाहकारहरुलाई मात्र बोलाइएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता समाजका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले गरेका थिए ।
साँझ १८:३० बजे सुरुआत भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार हुम गुरुङलाई समाजका संस्थापक अध्यक्ष विजयबहादुर गुरुङ, भूपू अध्यक्ष क्या. प्रेमबहादुर गुरुङ, लन्डन इकाई अध्यक्ष डेभिड गुरुङ र अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङलगायतले फूल खादा तथा समाजको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरे ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै संस्थापक अध्यक्ष विजयबहादुर गुरुङले पत्रकार हुमबहादुर गुरुङको बेलायत भ्रमणप्रति खुसी व्यक्त गर्दै बधाई दिएका थिए । त्यस्तै सल्लाहकारहरु डेभिड गुरुङ, टेकबहादुर गुरुङ, देउबहादुर गुरुङ, क्या. प्रेमबहादुर गुरुङले पनि बोलेका थिए । उनीहरुले कास्की आवाजका पत्रकार तथा अध्यक्ष सरस्वती गुरुङजस्ता समाजसेवी तथा सक्षम सवाल व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित संस्थाहरुले बेलायत बोलाउन ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने कुरा राखेका थिए ।
अतिथि एवं पत्रकार हुम गुरुङले सोंपाल र चार भञ्ज्याङ समाज छिमेकी गाउँ भएको उल्लेख गरे । उनले चुनावबाट भएको अनुभव र युकेबाट पुर्‍याइएको सहायोग लागि धेरै धन्यवाद दिए । उनले आफू पनि सहयोगको लागि सदा तयार रहेको आश्वासन दिए । अन्तमा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले उनलाई बिदाइसहित स्वदेश फिर्तीको लागि शुभयात्रा भनेका थिए ।